Guudmarka ProZ.com » Shaqooyin & buuggaagta tusiyayaasha »
Sida habka shaqada ProZ.com ay u shaqeyso
Tafaasiil sahlan sida shaqooyinka luuqada la isugu gudbiyo habka shaqada ProZ.com.
1. Shaqo dibad ka keene soo dhejiya shaqo turjumaan ama afnaqid
Shaqo soo dhejintu waxay isugu jirtaa luuqad lamaana ah, tafaasiisha mashruuca, sicir sheegida waqti kama dambeyska, iwm. Shaqo soo dhejiyayaasha waxaa sidoo kale ay leeyihiin xulashada ay ku soo rogayaan xannibaada qaar ee shaqada sida luuqadaha dadka u dhashay, meesha uu ku sugan yahay, iyo waxyaabo badan.
Waa bilaash inaad shaqo soo dhejiso ProZ.com
2. Xirfadleyda luuqada daneeya waxay muujiyaan xiisaha ay u qabaan shaqada
Kuwa daneeya shaqada ee soo buuxiya xannibaadaha shaqada (hadey wax jiraan,) waxay qofka shaqada soo dhejiyey u soo gudbin karaan sicir soo bandhigida.
3. Shaqo dibad ka keenaha waxa uu doortaa adeeg bixiyaha oo si toos ayuu ula xiriiraa
Kadib markii sicir so bandhigida la helo, shaqo dibad ka keenaha wuxuu kadib dooran karaa mid ama adeeg bixiyeyaal farobadan ee shaqada si toosna waa uu ula xiriiri karaa. ProZ.com kuma soo dallacaneyso wax dulaal ah.
4. Jawaabcelintu si xulasho leh ayaa looga tegayaa kadib markii shaqada la dhameystiro.
Shaqada markii la dhameeyo kadib, shaqo soo dhejiyaha iyo adeeg bixiyaha waxay isu reebi karaan jawaabcelin.*
*Adeeg bixiyaha waa inuu jawaabcelinta ku oggolaadaa si toos ah taariikh nololeedkooda.
Wixii macluumaad dheeri ah ee habka shaqada, fadlan ka hubi FAQ.